Exodus 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Yosua Atemmufo Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ahene 2 Ahene 1 Beresosɛm 2 Beresosɛm Esra Nehemia Ester Hiob Dwom Mmebusɛm Ɔsɛnkafo Solomon Dwom Yesaia Yeremia Kwadwom Hesekiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadia Yona Mika Nahum Habakuk Sefania Hagai Sakaria Malaki Mateo Marko Luka Yohane Asomafo Nnwuma Romafo 1 Korintofo 2 Korintofo Galatifo Efesofo Filipifo Kolosefo 1 Tesalonikafo 2 Tesalonikafo 1 Timoteo 2 Timoteo Tito Filemon Hebrifo Yakobo 1 Petro 2 Petro 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda Adiyisɛm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4 Na Mose buae sɛ: “Na sɛ wɔannye me anni na wɔantie me,+ na wɔka sɛ ‘Yehowa nyii ne ho adi nkyerɛɛ wo’ nso ɛ?” 2 Ɛnna Yehowa bisaa no sɛ: “Dɛn na ekura wo yi?” Na obuae sɛ “Ɛyɛ poma.”+ 3 Ɛnna ɔkae sɛ: “Tow kyene fam.” Enti ɔtow kyenee fam, na ɛdan ɔwɔ;+ ɛnna Mose guan fii hɔ. 4 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Teɛ wo nsa so ne dua mu.” Na ɔteɛɛ ne nsa soo ne dua mu, na ɛdan poma wɔ ne nsam. 5 Na ɔkae sɛ: “Ɛno bɛma wɔagye adi sɛ Yehowa wɔn agyanom Nyankopɔn,+ Abraham Nyankopɔn,+ Isak Nyankopɔn+ ne Yakob Nyankopɔn+ no ayi ne ho adi akyerɛ wo.”+ 6 Afei Yehowa ka kyerɛɛ no bio sɛ: “Mesrɛ wo, fa wo nsa hyɛ wo kokom.” Enti ɔde ne nsa hyɛɛ ne kokom. Oyii no, na kwata ayɛ ne nsa ho fitaa te sɛ sukyerɛmma!+ 7 Afei ɔkae sɛ: “Fa wo nsa san hyɛ wo kokom.” Na ɔde ne nsa san hyɛɛ ne kokom. Na bere a oyi fii ne kokom no, na kwata no kɔ ma ne nsa ho ayɛ sɛ ne honam baabiara!+ 8 Na ɔkae sɛ: “Sɛ wɔantie wo na wɔannye sɛnkyerɛnne a edi kan no anni a, sɛnkyerɛnne a ɛto so abien no de, wobegye adi.+ 9 Na sɛ wɔannye nsɛnkyerɛnne abien yi anni na wɔantie wo+ a, kɔsaw Nil asubɔnten mu nsu na hwie gu asase kesee so, na nsu a wosaw fii Nil asubɔnten no mu no bɛdan mogya wɔ asase kesee so.”+ 10 Afei Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Yehowa, mesrɛ wo, ebesi nnɛ ne bere a wo ne w’akoa rekasa yi mpo, m’ano ntew, efisɛ me kasa yɛ nyaa na me tɛkrɛma yɛ duru.”+ 11 Ɛnna Yehowa bisaa no sɛ: “Hena na ɔyɛɛ ano maa onipa, na hena na ɔyɛ mum anaa ɔsotifo anaa nea ohu ade anaa onifuraefo? Ɛnyɛ me Yehowa?+ 12 Enti kɔ, na worekasa a, mɛka wo ho na makyerɛ wo nea ka.”+ 13 Nanso ɔkae sɛ: “Yehowa, sɛ obi foforo wɔ hɔ a wobɛsoma no a, mesrɛ wo soma no.” 14 Ɛnna Yehowa bo fuw Mose, na ɔkae sɛ: “Wo nua Lewini Aaron+ nni hɔ? Minim sɛ onim kasa. Na mpo ɔnam kwan so rebehyia wo. Sɛ ohu wo a, n’ani begye ne komam.+ 15 Wo ne no nkasa na fa asɛm no hyɛ n’ano,+ na sɛ worekasa a, mɛka wo ho, na ɔno nso rekasa a, mɛka ne ho,+ na mɛkyerɛ mo nea monyɛ.+ 16 Ɔbɛyɛ wo kyeame ama ɔman no; ɔno na ɔbɛyɛ ano ama wo+ na wo nso woayɛ sɛ Onyankopɔn ama no.+ 17 Na fa poma yi kura na wode ayɛ nsɛnkyerɛnne no.”+ 18 Afei Mose san kɔɔ n’ase Yetro hɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ:+ “Mesrɛ wo, mepɛ sɛ mesan kɔ me nuanom a wɔwɔ Egypt no nkyɛn kɔhwɛ sɛ wɔda so te ase+ anaa.” Ɛnna Yetro ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Fa asomdwoe kɔ.”+ 19 Na Yehowa ne Mose kasae wɔ Midian sɛ: “San kɔ Egypt, efisɛ wɔn a na wɔrehwehwɛ wo kra no nyinaa awuwu.”+ 20 Ɛnna Mose faa ne yere ne ne mma de wɔn tenaa afurum so, na osiim de n’ani kyerɛɛ Egypt. Na ɔfaa nokware Nyankopɔn no poma no kurae.+ 21 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Sɛ wunya kodu Egypt a, hwɛ sɛ wobɛyɛ anwonwade a mede ahyɛ wo nsa no nyinaa wɔ Farao anim.+ Na mɛma wapirim ne koma;+ na ɔremma ɔman no kwan nkɔ.+ 22 Na ka kyerɛ Farao sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Israel yɛ me ba, me ba panyin.+ 23 Mise wo sɛ: Ma me ba no kwan na ɔnkɔsom me. Na sɛ woamma no kwan ankɔ a, mekum wo ba panyin.”’”+ 24 Na ɛbae sɛ woduu ɔkwan no so ahomegyebea+ bi no, Yehowa behyiaa no+ na ɔpɛe sɛ okum no.+ 25 Ɛnna Sipora+ faa ɔbo bi a ano yɛ nnam de twaa ne ba no twetia+ na ɔma ɛkaa ne nan, na ɔkae sɛ: “Woyɛ mogya ayeforokunu ma me.” 26 Ɛnna ogyaa no. Na twetiatwa no nti Sipora kae sɛ: “Woyɛ mogya ayeforokunu.” 27 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Kohyia Mose wɔ sare so.”+ Enti okohyiaa no wɔ nokware Nyankopɔn no bepɔw+ so na ofew n’ano. 28 Na Mose kaa nsɛm a Yehowa de asoma no+ ne nsɛnkyerɛnne a wahyɛ sɛ ɔnyɛ+ nyinaa kyerɛɛ Aaron. 29 Enti Mose ne Aaron kɔboaboaa Israel mpanyimfo nyinaa ano.+ 30 Afei Aaron kaa nsɛm a Yehowa ka kyerɛɛ Mose no nyinaa,+ na ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne+ no wɔ nkurɔfo no anim. 31 Ɛbaa saa no nkurɔfo no gye dii.+ Na bere a wɔtee sɛ Yehowa adan n’ani+ aba Israelfo so na wahu wɔn amanehunu+ no, wɔbɔɔ wɔn mu ase de wɔn anim butuw fam.+